တရုတ်လျှပ်စစ်အပူပေးဖုန်စုပ်စက် emulsifying ပစ္စည်းကိရိယာများ|အလှကုန်ပြုလုပ်သည့်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများ |ZhiTong
Stainless steel ရောစပ်ကန်များ stainless steel mix t...
နှစ်ထပ် homogenizer ဖုန်စုပ်စက် emulsifying ရောနှောစက်|...
အပေါ်ပိုင်းကို တူညီအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အတူ ဖုန်စုပ်စက်ကို တူညီအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း emulsifier...
PLC နှစ်ထပ် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ ဖုန်စုပ်စက် ရောနှော...
ရောသမမွှေပါ နှင့် ဖုန်စုပ်စက် အမျိုးအစားတူ ခရင်မ်ရောစပ်စက် | အလှကုန်...
အပေါ်ပိုင်း Homogeneous motor ဖြင့် လေဟာနယ် ရောစပ်စက် | C...
ဖုန်စုပ်စက် အလှကုန်အတွက် Homogenizer | Homogenizer ...
ရိုးရိုး အလှကုန် ရောစပ်စက်
အတွင်းနှင့်ပြင်ပသွေးလည်ပတ်မှု homogenizer emulsi ...
လျှပ်စစ်အပူပေးဖုန်စုပ်စက် emulsifying ကိရိယာများ|Cos...
အလှကုန်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အဓိက အောက်ခြေ ရောနှော emulsifier|Cosm...
စက်အတွင်းနှင့် ပြင်ပသွေးလှည့်ပတ်မှု emulsifying စက်...
Vacuum Homogenizer Emulsifier|အလှကုန် Homogenizer f...
ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ emulsion ရောနှောစက်I အလှကုန် ...
အလွန်မြန်နှုန်းမြင့် machi ပါရှိသော ဖုန်စုပ်စက် homogenizer...
အဆင့်မြင့် PLC Vacuum Homogenizing Emulsifier|Hom...
လျှပ်စစ်အပူပေးဖုန်စုပ်စက် emulsifying ကိရိယာများ|အလှကုန်ပြုလုပ်သည့်ကိရိယာ
1. လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ခလုတ်ခလုတ် ထိန်းချုပ်အကန့်
2. Tank ပစ္စည်းများ။အတွင်းအလွှာ SS 316။ အလယ်နှင့် အလွှာ SS304
3. မော်တာအမှတ်တံဆိပ်- AAB သို့မဟုတ် Siemens
4.Heating method : ရေနွေးငွေ့ အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်း
5. Power supply : သုံးဆင့် 220voltage 380voltage 460voltage 50HZ 60HZ ရွေးချယ်မှုအတွက်
6. ဦးဆောင်အချိန် 30 ရက်
7. စနစ်ဖွဲ့စည်းမှု : ရေအဆင့်အိုး၊ ဆီအဆင့်အိုး၊ emulsifying အိုး၊ ဖုန်စုပ်ပန့်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ အလုပ်လုပ်ပလပ်ဖောင်း၊ လှေကားနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများ
1.စတီးလ်သုံးလွှာ အိုးကိုယ်ထည်သည် အလယ်အလွှာ၊ အပူလျှပ်ကာအလွှာဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းထိတွေ့မှုအပိုင်းမှာ 316L၊ အလယ်အလွှာမှာ အပူအလွှာ 304 သံမဏိနှင့် အပူလျှပ်ကာအလွှာသည် အပူထိန်းအလွှာ 304 သံမဏိတို့ဖြစ်သည်။ .
2.စက်တစ်ခုလုံး၏ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု ကောင်းမွန်ပြီး အကောင်းဆုံး emulsification စနစ်ဖြစ်သည်။
3.အဆင့်မရှိသောအမြန်နှုန်းစည်းမျဉ်း၊ 6000rpm အထိမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း၊ သင်၏ဖြတ်တောက်ထားသောလိုင်းအမြန်နှုန်း 66m/s အတွက်မြင့်မားသည်။
4.တစ်သားတည်းဖြစ်နေသော မွှေခြင်းနှင့် လှော်တက်မွှေခြင်းတို့ကို သီးခြားစီ သို့မဟုတ် တစ်ချိန်တည်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ပစ္စည်းပြန့်ကျဲခြင်း၊ တစ်သားတည်းဖြစ်ခြင်း၊ emulsification၊ ရောစပ်ခြင်းနှင့် ရောစပ်ခြင်းကို အချိန်တိုအတွင်း ပြီးမြောက်နိုင်ပါသည်။
5.စတီးလ်သုံးလွှာ အိုးကိုယ်ထည်သည် အလယ်အလွှာ၊ အပူလျှပ်ကာအလွှာဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းထိတွေ့မှုအပိုင်းမှာ 316L၊ အလယ်အလွှာမှာ အပူအလွှာ 304 သံမဏိနှင့် အပူလျှပ်ကာအလွှာသည် အပူထိန်းအလွှာ 304 သံမဏိတို့ဖြစ်သည်။ .
6.စက်တစ်ခုလုံး၏ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု ကောင်းမွန်ပြီး အကောင်းဆုံး emulsification စနစ်ဖြစ်သည်။
6.အဆင့်မရှိသောအမြန်နှုန်းစည်းမျဉ်း၊ 6000rpm အထိမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း၊ သင်၏ဖြတ်တောက်ထားသောလိုင်းအမြန်နှုန်း 66m/s အတွက်မြင့်မားသည်။
7.သင်၏ မတူညီသော လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင် (အပိတ်၊ အဖွင့်၊ ပုံမှန်ဖိအား၊ လေဟာနယ်)နှင့် တွေ့ဆုံပါ။
8.သင့်အား လုံခြုံရေးအတွက် ဝန်ပိုမှုကာကွယ်မှု၊ နှစ်ထပ်အကာအကွယ်နှင့် ကာရံကာ၊
9.ပြင်ပမွှေသည့်ပုံစံ- သာမန်ထိရောက်မှုထက် 2/3 ပိုမိုမြင့်မားသည့် ခရုပတ်ကြိုးကို ခြစ်ခြင်းနှင့် မွှေခြင်း၊
၁၀။အတွင်းပိုင်းမွှေသည့်ပုံစံ- အရည်၏စီးဆင်းမှုကို ပို၍မမှန်စေသည့် လှော်တက်မွှေသည့်ပုံစံ၊ ကောင်းသောရောစပ်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိစေရန်။
၁၁။ရောစပ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အပြည့်အ၀ ဂဟေဆက်သည့်နည်းလမ်းကို လက်ခံသည်၊ ရောစပ် pad ၏ဖွဲ့စည်းပုံကို 45 ဒီဂရီတွင်စီစဉ်ထားပြီး၊ အဆစ်များသည် 90 ဒီဂရီထောင့်၏မျိုးဆက်ကိုရှောင်ရှားရန်တတ်နိုင်သမျှဝေးသည်။
၁၂။ဘောင်-အမျိုးအစား နံရံကို မွှေနှောက်ယှက်သည့် ကိရိယာကို မွေးစားထားပြီး၊ မွှေသည့် သက်ရောက်မှုအား ခြေလှမ်းမဲ့ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း အမြန်နှုန်းထိန်းကိရိယာဖြင့် ချိန်ညှိကာ အမြန်နှုန်းကို 12-120 rpm အတွင်း စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်သည်။စတီယာရင်သည် အပေါ်မှအောက်ခြေသို့ နာရီလက်တံအတိုင်း လှည့်ကာ အမျိုးမျိုးသော viscosity ပစ္စည်းများ၏ emulsification လုပ်ဆောင်မှုတွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။
၁၃။သံမဏိ discharge valve အမျိုးအစားကို အိုး၏အောက်ခြေတွင် သေထောင့်မရှိစေရန်အတွက် အထူးအမျိုးအစားဖြစ်သည့် သံမဏိထုတ်လွှတ်မှုအဆို့ရှင်ကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး၊ တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်းနှင့် emulsification အရည်အသွေးကို ပိုမိုတိုးတက်စေပါသည်။
၁၄။အမြန်နှုန်းလျှော့ချသူသည် cycloidal pin wheel reducer ကိုလက်ခံပြီးချောဆီသည် 2L-2 လီသီယမ်အောက်ခံဆီဆီလက်ခံသည်။
၁၅။emulsification အိုး၏ကိုယ်ထည်သည် ဂျက်ကတ်သုံးလုံးဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့သည့်အတွင်းပိုင်းအိုး၏အစိတ်အပိုင်းများကို 304 နှင့် ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် အဆိပ်မရှိသောနှင့် အန္တရာယ်ကင်းသောပစ္စည်းများကို တင်သွင်းပါသည်။စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချရန် အပြင်ဘက်အလွှာကို အပူလျှပ်ကာချည်ဖြင့် ဖြည့်ထားသည်။အိုးအဖုံးပေါ်တွင် ခြစ်ခြစ်တစ်လုံး၊ ဟင်းခတ်ပုံး၊ ဇကာ၊ လေဟာနယ် ဖိအားတိုင်းကိရိယာ စသည်တို့ပါရှိသော မြင်ကွင်းမှန်နှင့် ဖုန်စုပ်ဖန်ခွက်တစ်ခု ပါရှိပါသည်။
၁၆။အပူပေးခြင်း၊ အအေးခံခြင်း၊ နှိုးဆော်ခြင်း၊ တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း ထိန်းချုပ်ခလုတ်များနှင့် အပူချိန်တိုင်းသည့်ကိရိယာများကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို ထိန်းချုပ်ရန် ကက်ဘိနက်အကန့်ပေါ်တွင် အာရုံစိုက်ထားသောကြောင့် လည်ပတ်ရအဆင်ပြေပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
၁၇။ဤစက်ပစ္စည်းတွင် ဟိုက်ဒရောလစ် ရုတ်သိမ်းခြင်းစနစ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရုတ်သိမ်းခြင်း၊ လည်ပတ်ရန် လွယ်ကူသည်၊ ပိတ်ထားသော အခြေအနေအောက်တွင် ပစ္စည်းကို ထိထိရောက်ရောက် emulsify လုပ်နိုင်သည်၊ သာမန် ပုံသေဆွဲတင်ခြင်းစနစ် မရှိပါ။
၁၈။လေဟာနယ် emulsifier သည် နိုင်ငံခြားနည်းပညာကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး အလှကုန်နှင့် ဆီမွှေး ထုတ်ကုန်များ၏ ခရင်မ်လိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အရ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ဤယူနစ်တွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအိုး၊ ဖုန်စုပ်စက် ရောစပ်ထားသောအိုး၊ လေဟာနယ်ပန့်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် အလုပ်လုပ်သည့်ပလပ်ဖောင်းတို့ ပါဝင်သည်။
၁၉။ခရုပတ်ဖဲပြားကို ခြစ်ခြင်းနှင့် ရောစပ်ခြင်းသည် ထုတ်ကုန်ကို ရောနှောရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး ရောစပ်ခြင်း၏ ထိရောက်မှုသည် သာမန်ဘောင်ရောစပ်ခြင်းထက် အနည်းဆုံး 2/3 ပိုများပါသည်။
၂၀။မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် ဒိုင်နမစ်ချိန်ခွင်လျှာလိုအပ်ချက်များကိုသေချာစေရန်အတွက် တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေသောဦးခေါင်းအား တိကျမှုမြင့်မားသောစက်ယန္တရားစင်တာမှလုပ်ဆောင်ပါသည်။တူညီသောစွမ်းအင်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် သမားရိုးကျဂီယာလက်စွပ် disperser ထက်2~ 5μm ပိုနုသော emulsion ကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။
၂၁။speed vacuum emulsifying ရောစပ်ကိရိယာကို ဘွိုင်လာအဖုံးကို လွတ်လပ်စွာ ရုတ်သိမ်းနိုင်ပြီး နှိမ့်ချနိုင်ပြီး ဘွိုင်လာတိမ်းစောင်းမှုကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော ဆီဖိအားရုတ်သိမ်းရေးစနစ်ဖြင့် ပံ့ပိုးထားပါသည်။
ဟိုက်ဒရောလစ် ဓာတ်လှေကားပါဝါ (kw)
စုစုပေါင်း ဓာတ်အား (kw)
မှတ်ချက်- ဖောက်သည်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအရ စက်အတိုင်းအတာမော်တာပါဝါကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း- ဆေးဝါး emulsion၊ ဆီမွှေး၊ ခရင်မ်၊ မျက်နှာဖုံး၊ ခရင်မ်၊ တစ်ရှူးတစ်ရှူးကို တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းကို တစ်သားတည်းဖြစ်စေခြင်း၊ ဖျော်ရည်၊ ပုံနှိပ်မင်၊ ယို။
(၁) နေ့စဉ် ဓာတုဗေဒနှင့် အလှကုန်လုပ်ငန်း- အသားအရေထိန်းခရင်မ်၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခရင်မ်၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ သွားတိုက်ဆေး၊ အအေးခံခရင်မ်၊ နေရောင်ကာခရင်မ်၊ မျက်နှာသန့်စင်ဆေး၊ အာဟာရပျားရည်၊ ဆပ်ပြာ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ စသည်တို့။
(၂) ဆေးဝါးလုပ်ငန်း- အစေး၊ emulsion၊ မွှေးရနံ့ (ဆီမွှေး)၊ ခံတွင်းဆေးရည် စသည်တို့။
(၃) အစားအစာလုပ်ငန်း- ငံပြာရည်၊ ဒိန်ခဲ၊ ခံတွင်းအရည်၊ ကလေးအစားအစာ၊ ချောကလက်၊ သကြားပြုတ် စသဖြင့်၊
(၄) ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း- စေး၊ ငံပြာရည်၊ saponification ထုတ်ကုန်များ၊ သုတ်ဆေး၊ အပေါ်ယံပိုင်း၊ အစေး၊ ကော်၊ ဆပ်ပြာ၊ စသည်တို့။
1.ပါဝါထောက်ပံ့မှု- သုံးအဆင့် : 220v 380v .415v ။50HZ 60HZ
2.ပမာဏ : 100L မှ 5000L အထိ
3.မော်တာအမှတ်တံဆိပ်: ABBSiemens ရွေးချယ်မှု
4.အပူပေးနည်းလမ်း- လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်းနှင့် ရေနွေးငွေ့အပူပေးခြင်း ရွေးချယ်မှု
5.စာစီစာကုံး run ရန်အတွက် control system သော့အောက်ခြေ
6.ပုံသေအမျိုးအစား သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ် ရုတ်သိမ်းခြင်း အမျိုးအစား သို့မဟုတ် အမှုန်အမွှား ရုတ်သိမ်းခြင်း။
7.အမျိုးမျိုးသော လှော်တက်ဒီဇိုင်းများသည် ကွဲပြားခြားနားမှုလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
8.သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် တောင်းဆိုချက်အရ SIP နံပါတ်ကို ရနိုင်ပါသည်။
ယခင်- နှစ်ထပ် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ emulsion ရောနှောစက်|အလှကုန် Homogenizer
နောက်တစ်ခု: အတွင်းနှင့်ပြင်ပလည်ပတ်မှု homogenizer emulsifier mixerIcosmetic mixer
ပုံသေအမျိုးအစားဖုန်စုပ်စက် homogenizer အလှကုန်ရောနှော ma ...
ဟိုက်ဒရောလစ် ရုတ်သိမ်းခြင်း အမျိုးအစား ဖုန်စုပ်စက် emulsifier | Vacuu...
Vacuum Homogenizer Emulsifier | အလှကုန် Homogeni...
နှစ်ထပ် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ emulsion ရောနှောစက်...
ဓာတ်ခွဲခန်းလေဟာနယ် emulsifier|အလှကုန်များအတွက် Homogenizer